Mahjong Age of Alchemy 15 minutes Game Unblocked | Ciyaar Bilaash ah 2021 Featured, Ciyaaraha Mahjong!
Hoyga / Featured, Mahjong / Mahjong Age of Alchemy 15 daqiiqado
Mahjong Age of Alchemy 15 daqiiqado
arcadium mahjong mobilka xujo
Ku quuso adduunyada qarsoon ee kimistariga qarniyadii hore ee Mahjong: Da'da Alchemy 15 daqiiqado. Wakhtigaas, aqoonyahanno caqli badan ayaa darsay astaamaha walxaha iyo falcelintooda isku dhafka kala duwan. Magaalada Mahjong: Da'da Alchemy waxaad raacdaa raadadka maskaxdan caqliga badan waana inaad ka heshaa iskudhafyo isku mid ah foornada mahjong si isku mid ah si garoonka cayaaruhu u bannaanaado sida ugu dhakhsaha badan.
Qeybaha ciyaarta waxay ku saleysan yihiin astaamo caan ah oo caan ah, iyo sidoo kale aaladaha loo adeegsaday qarniyadii dhexe si loo baaro walxaha loo arko sixir. Raadi laba dhagax oo isku mid ah, calaamadee oo ka saar goobta ciyaarta. Ujeeddada ciyaartu waa in lagu nadiifiyo dhammaan dhagaxyada waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Waxaad heli doontaa dhibco isugeyn kasta oo sax ah.
By habka, waxaad had iyo jeer yeelan kartaa loox cusub oo ciyaarta lagu dhisay adigoo gujinaya "Deal Tile New set". Haddii aad ku dhegto ama aad dareento sidii tartan cusub, shaqadan ayaa adiga kugu habboon.
Ku tartama ciyaartoyda kale ee Arena!
[Wadarta: 8 Celcelis: 4.5/5]